Aim Hunter - Patch 7.3.5 | Hunters, DPS, Game Guide | WoW Guides | WoW Guides
Sofia Vigo | | mpihaza, DPS, Game Guide
Salama ry zalahy, eto indray aho miaraka aminao hitondra mpitari-dalana anao amin'ny mpihaza tanjona amin'ny patch 7.3.5. Manantena aho fa tianao izany ary mamporisika anao hamorona toetra amam-panahy miaraka amin'ity specialty ity na raha efa manana izany dia manomeza fanazavana fanampiny momba izany
Mpihaza mpamaky marika
Ireo mpihaza marchanship koa dia efa zatra amin'ny loza ateraky ny ala, tonga lafatra ny fampiasana fitaovam-piadiana izay mahafaty kokoa amin'ny lavitra. Saingy tsy dia liana amin'ny fahazoana ny tsy fivadihan'ny biby marobe monina amin'ireny faritra masiaka ireny izy ireo. Fa kosa, ilay mpihaza Marksmanship dia manamboatra ny tenany amin'ny tontolo manodidina ary mandalina ny fihetsik'ireo mpiremby mba hamoronana fomba vaovao mahafaty hanangonana ny rembiny. Sniper mety hitranga, mitifitra zana-tsipìka sy bala miaraka amina famonoana mahafaty ity mpihaza ity, mampiseho ny fahalemen'ny olona - na zavatra hafa - eo imasony.
Amin'izao fotoana izao dia manana ny napetraka ilay mpihaza mpanafika marika Fisehoana stalker bibilava. Rehefa mampita singa roa amin'ity seta ity dia hahazo bonus isika ary rehefa manome ny 4 amin'izy ireo dia hanampy bonus hafa izahay. Satria misy singa enina ny ekipa dia hanana safidy isika hisafidy ny iray mety indrindra aminay, hahazo ny bonus amin'ireo sanganasa efatra ary hahafahana manatsara ny lalao ataonay amin'ny alàlan'ny fanararaotana ireo fanatsarana izay mampita ny tenanay amin'ireo efatra manome antsika ny sombin-tsolika.
Akanjo lava stalker bibilava
Menarana Stalker Mantle
Helmet Stalker Helmet
Menarana Stalker Legguards
Tapa-2: Ny fifantohanao miteraka fanafihana dia miteraka fahasimbana 30% bebe kokoa ary miteraka fifantohana 25% bebe kokoa.
Tapa-4: Marked Shot dia manana vahana 50% hamoaka indray ny tanjona telo fanampiny nokapohan'i Marked Shot.
Tsy nisy fiovana ny fahaizan'ilay mpihaza marika.
Eto dia manana ny fananganana talenta ampiasaiko amin'ny fotoana ilalaovako amin'ny palitao marika aho. Na izany na tsy izany, ary araka ny nolazaiko anao teo aloha, amin'izao fotoana izao dia manamora ny fahafahantsika manova talenta arakaraka ny sefo hatrehintsika isika, koa raha tsy tianao ny olona iray dia afaka manandrana hafa ianao mieritreritra fa afaka mandeha tsara indrindra ianao.
amboadia manirery: Mampitombo ny fahavoazanao 18%, fa tsy afaka mampiasa Call Pet intsony ianao.
Mifantoka mafy: Ny fampiasana Arcane Shot na Multi-Shot in-droa misesy dia mampitombo ny famerenanao fifantohana 25% mandritra ny 12 seg.
Hamafiso ny tanjonaoAimed Shot, Arcane Shot, Marked Shot, ary Multi-Shot dia manana 20% mitombo ny fahafaha-mitokona manohitra ny tanjona mihoatra ny 80% ny fahasalamana, ary ireo fitokonana fitsikerana ireo dia 30% no nitombo fahasimbana ho an'ny 8 seg.
amboadia manirery Izy no talenta mandeha amin'ny tsara indrindra saika isaky ny lalao.
Mihidy sy mamaha: Ny fanafihana mandeha fiara misy anao dia manana vintana 8% hiteraka Block and Charge, ka mahatonga ny tifirinao tondro roa manaraka tsy handoa vola ary eo noho eo.
Zana-tsipika mainty: Mandoro zana-tsipika mainty amin'ny kendrena, mifampiraharaha (520% amin'ny herin'ny Fanafihana) p. Ny fahasimban'ny aloka mihoatra ny 8 segondra ary miantso minion mainty hamelezana azy mandritra ny fotoana maharitra. Rehefa mamono fahavalo ianao dia tafaverina ny cooldown sisa tavela amin'i Black Arrow.
Tanjona tsara: Ny tifitra Arcane Shot na Aimed Shot isaky ny tanjona dia mampitombo ny fahasimbana naterak'ireo tifitra ireo tamin'ny 2%. Mitambatra hatramin'ny in-10 ary voafetra ho lasibatra 1. SY
Tamin'ity indray mitoraka ity no nofidiko Tanjona tsara izay no mandeha tsara indrindra amin'ny tanjona tokana, amin'ny fihaonana hafa dia mila manova ny tanjona ampiasainao matetika ianao Mihidy sy mamaha. Zana-tsipika mainty mandeha tsara ho an'ny iraka manerantany raha te hampiasa azy isika.
Fahamaimaizana: Ny fisarahana dia manafaka anao amin'ny vokadratsin'ny fihetsiketsehana rehetra ary mampitombo ny hafainganao amin'ny 60% mandritra ny 5 seg.
Mpirenireny:: Ny grevy fikomiana avy amin'ny fahaizanao manana 15% vintana hamerina ny cooldown sisa tavela ao amin'ny Detachment.
Burns: Hisondrotra 30% ny hafainganam-pandehanao raha tsy notafihana 3 segondra ianao.
Amin'ity tranga ity ary tsy misy fisalasalana no nofidiko Fahamaimaizana
Tifitra nipoaka: Mandrosoa ny ammo mandroso. Ny fampandehanana an'io fahaiza-manao fanindroany io dia mitifitra ny tifitra farafaharatsiny (1000% amin'ny herin'ny fanafihana). Fanimbana afo ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra, mifototra amin'ny akaiky azy ireo.
Sentinel: Ny mpiambina anao dia mijery ny faritra kendrena 18 segondra ary mampihatra ny Hunter's Mark amin'ny fahavalo rehetra isaky ny 6 seg.
Sniper marary: Mahazoa faharetana sniper taloha, mampitombo ny fahavoazan'ny bonus an'ny Vulnerable 6% isaky ny 1 seg.
Eto aho no nifidy Sniper marary satria mety amiko izany amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, na amin'ny tanjona iray na amin'ny maro.
Tifitra mifamatotra: Mandrehitra tetik'asa majika izay mampifandray ny fahavalo sy ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 5 metatra mandritra ny 10 seg, manaitra azy ireo mandritra ny 5 seg raha mihetsika mihoatra ny 5 metatra miala ny zana-tsipìka. Gaga ireo mpilalao kendrena mandritra ny fotoana fohy kokoa.
Wyvern Sting: Tifitra maranitra mampatory ny kendrena, tsy mahavita azy ireo mandritra ny 30 seg. Hanafoana ny vokany ny fahavoazana. Azo ampiasaina eny an-dalana izy io.
camouflage: Miaraka amin'ny tontolo iainana ianao sy ny biby fiompinao ary mahazo mangingina mandritra ny 1 min. Raha mitafy lamba ianao dia manasitrana fahasalamana 2% isaky ny 1 seg.
Nifidy aho Tifitra mifamatotra satria heveriko fa io no mety indrindra amiko Raid, na dia amin'ny fotoana sasany aza dia azontsika ampiasaina ho toy ny fahatapahana izany.
Andiana goaika: Miantso andiana goaika hanafika ny kendrenao, mifampiraharaha [(162% amin'ny herin'ny fanafihana) * 16] p. Fahasimbana ara-batana mihoatra ny 15 seg. Rehefa maty ny kendrena nefa voakasik'io fahaizana io dia miverina ny cooldown an'ny Flock of Crows.
tafio-drivotra: Mandefa havandra mitifitra maherin'ny 3 sec, mandefa haingana (80% * 10). fahasimbana ara-batana amin'ny fahavalo rehetra eo alohanao. Azo ampiasaina eny an-dalana izy io.
Salva: Raha mavitrika dia mandany 3 ny fanafihan'ny fiara anao. Mifantoha mba hamoahana tifitra bala izay nahatratra ny lasibatra sy ireo fahavalo hafa rehetra teo akaiky teo, fifampiraharahana (100% -n'ny herin'ny Fanafihana) p. fahasimbana ara-batana fanampiny.
Na dia nisafidy aza aho Andiana goaika izay tonga lafatra amin'ny tanjona tokana, amin'ny fihaonana sasany amin'ny tanjona marobe ampiasako Salva.
Serpentine: Mandefa bibilava zigzag mankany amin'ilay kendrena, mifampiraharaha (500% amin'ny herin'ny fanafihana) p. Voan'ny fahasimban'ny natiora ny tanjona tsirairay. Tsy afaka mamely ilay tanjona kendrena indroa izy ireo. Izy ireo dia mampihatra ny Vulnerable amin'ny lasibatra rehetra tratrany.
Tifitifitra: Tifitra matanjaka iray mahatratra hatramin'ny (2 * 775%). Fahasimbana ara-batana amin'ny lasibatra ary hatramin'ny 775% p. Fanimbana ara-batana ny fahavalo rehetra eo aminao sy ny lasibatra. Nitombo ny fahasimbana raha oharina amin'ireo lasibatra marefo.
Trick Shot: Aimed Shot dia hipoaka ihany koa ankehitriny, hamely ny lasibatra marefo rehetra, hiatrika 30% amin'ny fahasimbana ara-dalàna. Raha tsy misy tanjona mora tohina hafa dia nitombo 15% ny fahasimban'ny Aimed Shot manaraka.
Na dia amin'ny fivoriana sasantsasany aza aho dia afaka mampiasa Serpentine, Matetika aho mandeha Trick Shot, izay tena mandaitra amin'ny ankamaroan'ny ady.
Fifehezana> Fitokonana manakiana> Hainganana> Fahavitan-toetra
Enchantments and Gem
Vozona enchant - Mariky ny miaramila voaofana: Manamboatra rojo volo maharitra mba hampitomboana ny fifehezana 600.
Peratra Enchant - Famatorana ny fifehezana- Enchant maharitra ny peratra hampitomboana ny fifehezana 200.
Enchant Cloak - Famatorana ny fahaizany mihombo: Famosaviana akanjo fotsy maharitra mba hampitomboana ny fahaizan'ny 200.
Master Argulite: +200 Fifehezana
Chimirin mahery: +200 voa mafy
Flasks, potion, sakafo ary rune fampitomboana
Flask an'ny demonia fahafito: Mampitombo 400 ny fahakingan-tsaina. mandritra ny adiny 1. Isaina ho elixir ady sy mpiambina. Ny vokany dia mitohy any ankoatry ny fahafatesana. (3 Sec Cooldown)
Fetin'i Suramar: Manomàna Fetibe Suramar iray mahavoky fo mba hanomezana olona 35 amin'ny fanafihana na fety ataonao! Mamerina amin'ny taona 200000 p. fahasalamana sy 400000 20 p. mana mihoatra ny 10 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 300 segondra fihinanana ianao dia ho voky tena ary hahazo 1. ny statistika mandritra ny XNUMX ora.
Loharanon'ny sakafo matsiro: Mamerina amin'ny laoniny 200000 p. fahasalamana sy 400000 20 p. mana mihoatra ny 10 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 0 segondra fihinanana ianao dia ho voky tena ary hahazo 1. mari-pahaizana master mandritra ny XNUMX ora.
Magicien noana: Mamerina amin'ny laoniny 200000 p. ny fahasalamana ary 400000 p. mana mihoatra ny 20 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 10 segondra fihinanana ianao dia ho voky tena ary hahazo 1. grevy fitsikerana mandritra ny 1 ora.
lohany Helmet Stalker Helmet Aggramar
vozony Rojony Annihilator Argus the Annihilator
-tsorony Menarana Stalker Mantle Fivoriambe Shivarra
indray Wild Stalker Cape Vahiny tsy mendrika (Fasan'i Sargeras)
tratra Chestguard an'i Wildstalker Watcher Maiden (Sargeras Tomb)
saribakoly Mpisolovava mametaka mpanao hosoka Alefa Antorus
manos Snake Stalker Grips Kin'garoth
andilany Waistguard an'ny taktika maloto Antoran'ny baiko avo
tongotra Menarana Stalker Legguards Mpihaza fanahy Imonar
Pies Kiraro oram-panala Ullr
Boots mahafinaritra amin'ny oram-baratra mandoro
Tady 1 Fanahin'i Huntmaster
Tombo-kasen'ilay Pantheon voaloto
Tady 2 Tarika Mpanefy Sargerita
Trinket 1 Ny tanjaky ny Golganneth
Fahitana an'i Amanthul
malaza (Argus the annihilator)
Trinket 2 Fangia mandoro ala Felhounds
Storm Relic Kambana an'i Thunderer Argus the Annihilator
Rakitsa-dra Avenger's Crour Argus the Annihilator
Sisan'ny fiainana Fitiavan-drahalahy Felhounds
* Indraindray, toy ny trinket no ampiasaiko koa Crystal Arcane tsy miovaova o Fifanekena toeran-kaleha.
Usar Rivotra avy lavitra araka izay azontsika atao.
Usar Andiana goaika isaky ny azo atao fa mihevitra ny hanana azy vonona rehefa hiditra amin'ny 20% amin'ny fiainana ny lehibeny.
Usar Tifitra marina raha mbola Rivotra mijanona ho mavitrika.
Usar Voatifitra tifitra ary aorian'ny Arcane Shot
Usar Fisehoana ny sokatra Raha midina loza ny fiainantsika
Ary hamita vazivazy wow.
-Inona no lazain'ny olona iray maty?
Ianao ve mila kankana?
Mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka ry zalahy dia mihaona amin'ny Azeroth!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Aim Hunter - Patch 7.3.5
Miverina indray ny The Invitation of Mythic Dungeon: efa nanomboka ny toerana manaporofo!
Fiarovana Paladin - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5